April 2018 ~ brazesh
April 17, 2018 नेपाली, फाइँफुट्टीराज No comments
तपैंहरूलाई लाग्छ होला, पत्यारै नलाग्ने कुरा ओल्बाले मात्र गर्छन् । नसोचेको कुरा उनैले मात्र फेला पार्छन् । यो कुरामा फाइँफुट्टीराज पनि कम छैन । त्यस्तै अप्रत्याशित रूपमा फेला परेको एउटा बहुमूल्य कुराले केही दिनदेखि फाफुराको नाक फुलेर देशको शोधनान्तर घाटाभन्दा ठूलो भएको छ । यो सुन्दा तपैंहरूलाई लाग्यो होला फाफुरालाई ठूलै चिठ्ठा परेको होला र 'ह्वाट्सएप्' मार्फत त्यसको सन्देश पनि आइसकेको होला । भारतको कुनै बैंकमा अलिअलि सेवा शुल्क पठाएपछि त बजिया फाफुरा मालामाल हुने भयो । तपैंको मुखमा बियर र चिकन चिल्ली परोस् । त्यसो भइदिए त फाइँफुट्टी हाँक्ने विषय नपाएको बेला फाफुरा रत्नपार्क हैन, बेलायतको हाइड पार्कमा गएर टोपीले मुख छोपेर सुत्थ्यो । फाफुरा आशावादी छ । अरू सबैजसो नेपालीलाई परिसकेको त्यो लाखौं डलरको चिठ्ठा फाफुरालाई पनि कुनै दिन कसो नपर्ला र ? उसो भए 'त्यसरी चुम्रुक्चुम्रुक् परेर उफ्रन के भेटिस् त फाफुरो' भनेर सोध्नुहोला ।
फाफुरीले फाफुरी भेट्यो ।
१२ बूँदे फाफुरावली
April 10, 2018 नेपाली, फाइँफुट्टीराज No comments
फाफुरावलीका बाह्र बूँदाहरू
घरबाट निस्कँदा हरेक मानिसले कम्तीमा तीन लिटर पानी खाएको हुनुपर्नेछ ता कि उसलाई बाटोमा लघुशंकाले अनिवार्य च्यापोस् । त्यसरी बाटोमा पिसाब फेर्ने हरेक जिम्मेवार नागरिकलाई ड्यूटीमा खटिएका नगरप्रहरीले खदा ओढाएर सम्मानित गर्नेछन् । अझ कुनै वहादुरले बिष्ट्याउनै सक्यो भने उसलाई प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरिनेछ । बाटोमा कम्तीमा एकपटक दैनिक रूपमा मूत्रत्याग गर्न नसक्ने वा लाज मान्नेलाई दुई सय रुपैयाँ जरिवाना गराइनेछ । गोजीमा नगद नभएको अवस्थामा कान समातेर दश पटक उठवस गराइनेछ ।
करोड पर्ने गाडी वा लाखौं पर्ने भटभटेबाट मन लागेको बेला पछाडि नहेरी पिच्च थुक्न पाउने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ । अगाडि गैरहेकोले कुनै पनि बेला, केही पनि गर्न सक्छ, सावधान रहनु पर्छ । अग्रगामीहरू मानिसहरूले पछाडि हेर्दैनन्, त्यो ऊनीहरूलाई शोभा दिँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । यदि त्यो थुकका छिटा अरू कसैलाई पर्छ भने त्यो थुकिनेको दोष मानिनेछ । आगामी दिनहरूमा सावधान रहन चेतस्वरूप थुक छल्न नसक्नेलाई हरेक पटक थुकिंदा नगद पचास रूप्याँ जरिवाना गरिनेछ । पैदल यात्रुले पनि हरेक पाँच मिनेटको अन्तरालमा कम्तीमा एकपटक बाटोमा थुक्नै पर्नेछ । यस गौरवशाली कार्यका लागि प्रोत्साहन स्वरूप हरेक पटक थुके वापत मोरू शून्य दशमलव पाँच अर्थात् पचास पैसा प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गरिनेछ । खकार्न सक्नेले एक रूपैँया पाउनेछ ।
"बिन्ती लाग्ला, तपैंलाई पशुपतिनाथको कस्सम, आज त जसरी भए पनि मेरो उद्धार गरिदिनुस् है ?"
फाइँफुट्टीराज फोनमा पिलपिल गर्दै सकेजति मीठो र चाप्लूस स्वरमा यसरी बोल्यो, जसरी सरकारी कार्यालयमा आएको नयाँ हाकिमसंग कुनै पुरानो खरदार बोल्छ । त्यसमाथि नेपालीहरूको हर समस्याको रामवाण ओखति पशुपतिनाथको 'तडका' । अब त उताको प्राणी नपग्लिई सुख्खै छैन भन्ने कुरामा फाफुरालाई ओलीको बोलीमा नेपाली जनतालाई जति नै विश्वास थियो । तर, उसको सपनामा पानी खन्याउँदै त्यो नास्तिक, पापी र अधर्मी मानिसले भन्यो, "पशुपतिनाथ, दिलीपनाथ, विश्वनाथ, काशीनाथ, आलोकनाथ कसैको कस्सम दिए पनि म केही गर्न सक्दिनँ ।"
उसको त्यो क्रूर उत्तर सुनेर फाफुराका पहिले देखि नै रसाएका दुई आँखाबाट मेलम्चीको पानी भन्दा दुर्लभ आँशुका दुई थोपा तररर्र निस्किएर बगे । ती भुइँमा खसेर खेर जानु अघि फाफुराले हत्तनपत्त तिनलाई हत्केलामा थाप्यो र छेउको एउटा सानो शीशीमा सुरक्षित राख्यो जुन आधा जति भरिइसकेको थियो । फाफुराले पम्प व्यवसायीले पेट्रोलमा मट्टितेल मिसाए जसरी आफ्नो स्वरमा करूण रसको मात्रा मिसायो र त्यो मानिसलाई फकाउन थाल्यो,
"आज चार दिन भैसक्यो मैले यहाँलाई बिन्ती बिसाएको । मानवताको नाताले भए पनि त्यसो नभन्नुस् न ।"
"थाहा छ, तर मैले के गर्ने ? कसकसलाई मानवता देखाउनु म एकजनाले ? तै पनि तपैं पुरानो मुर्‍… मेरो मतलब 'कस्टमर' हो । दया त लाग्छ नि । त्यही भ'र हिजो एक डोज भए पनि कोटा सप्लाइ गरिदिन्छु भनेर आधा बाटोसम्म आएकै हूँ । तर तपैंको कर्मजस्तै तपैंको डेरातिर आउने बाटो पनि फोडेको रहेछ । अर्कोतिरबाट आउन ट्राफिक जाम हुन्छ, तीन घण्टा त्यसै खेर जान्छ । एक त त्यसै पनि 'माल' छैन आजकल, कस्तो सर्टेज छ ।"